Date My Pet » Zvakanaka adanane A Man Married?
Last updated: Nov. 19 2020 | 3 Maminitsi verenga
Kune vakadzi vakawanda vanowa murudo nevarume vakaroora nokusaziva, nepo nemaune vamwe vakawanda vatsvake varume vakaroora kuti mabayo (pun akaronga) yokuva munhu zvazviri dzisiri kuwanika. zvisinei, mubvunzo nguva dzose inoramba zvingave zvakanaka kuwira murudo ane murume akaroora?
Kudonha murume murume ingaita zvakanaka, kunyanya kana munhu anoti vanonzwa zvakafanana uyewo. Pamusoro pe, mukadzi ari mumamiriro ezvinhu akadaro zvinogona kuwana pfungwa yenhema yokuchengeteka kuti murume achakurumidza kuparadzanisa kubva mudzimai, zvokuti ukama hwavo vanogona maruva risina kumiswa. Kunyange zvakadaro, mumwe fallacy, rinoda dzichakoromorwa zvakakwana zvinotevera.
Vakadzi vanofanira kudzidza kuremekedza pachavo
Murume ane mhuri havazombokwanisi kupa mukadzi kugutsikana yokuva noukama chaiyo. murume Kunyange kana ari kutora nguva yake kutarisira kwake nokungwarira, rudo, uye nezvipo, chokwadi, hachizovi kushandura chinhu!
mukadzi akadaro anofanira kuedza vakazvirongedza shangu mudzimai womurume. Vaizonzwa sei kana mumwe mukadzi saizvozvo kwavari? Kana ivo pachavo zvechokwadi vanoremekedza, ipapo vanofanira kunzwisisa kuti chinhu bedzi ivo achaguma kuita zviri kuputsa yemhuri, uye kuti haasi dzakakura mukadzi upi anoda, Ndinovimba!
Varume haazombofi kusiya vakadzi vavo
Kunyange kana vanhu kuimba pamusoro uye pamusoro zvakare kuti ivo achaparadzanisa kubva madzimai avo nokukurumidza kuitira kuti vave noukama chaihwo ake vakawana rudo idzva, zviri kumbobvira kuzoitika. Kana varume kuwana vakadzi vanobvuma kuva ukama navo, muchiziva kuti vane mhuri, ipapo varume kupinda nokufunga. Muchiitiko ichi, vachava unoda zvechokwadi kuramba chinzvimbo-kwakabva, sezvo asingadi vachaita kusiya mhuri dzavo.
Funga romunhu mhuri
Women, regai kuva noudyire! Usati wasarudza kuva noukama kuti murume akaroora, yeuka mhuri iri kuenda ichiparadzwa. Mamiriro acho ezvinhu achava kuipa kana pane vana zvinobatanidzwa. Vana zvachose kuva zvakaipisisa sei kana munhu anosarudza kuvasiya. Uye ngatirege kukanganwa mudzimai, uyo vangave anosiya mavanga upenyu.
Kana chinhu chimwe, ipapo mhuri inofanira vabvume mukadzi kuti hazvina kururama kuwira murudo ane murume akaroora.
Vakadzi harimbofaniri chisiri pane vanokodzera
Nei panyika, wakaramba wakanaka, akangwara uye akachenjera mukadzi vanoda kugadzirisa kuti munhu haagoni kuita muukama chaihwo, nokuti murume akaroora? Hazvingavi mukadzi akadaro kuva nani kutsvaka murume kuroora ndiani achange zvizere akatsaurira kuva noukama chaihwo? Vakadzi vanofanira manyorerwo uye kutenda pachavo uye avo vanokwanisa kukwezva munhu chete murume, navo vanogona kugoverana noukama pasina tambo zvakabatanidzwa.
Hazvina kunaka uchirwadziwa pamusoro nokuputsa rudo dendere
Rudo ndicho chimwe chezvinhu zvakaoma manzwiro kudzora. Sezvinongoitawo mukadzi zvechokwadi uye zvikuru kuti rudo murume akaroora, chokwadi ndechokuti ukama haasi kunangepi kwese. Nokuda kwechikonzero ichi, zviri nani zvatopera ndikurumidze, pane gare gare, kuti kuwana nguva yakakwana kuporesa. Iva nechokwadi chokuti hazvisi nyore zvachose, asi zvichava zvakakodzera pakupedzisira.
Regai kuva neanozununguswa zvinofungwa nevamwe
Mumwe mukadzi ari ukama murume akaroora vachatongwa nevamwe kumakona zvose. mukadzi, saka, anofanira kuva nesimba uye kumedura nomunhu kure nokuti ndicho chinhu chakarurama chokuita. Pamusoro pe, ndezvenguva mukadzi vabatsirwe kuiputsa kure, kukwanisa kusangana munhu anogona zvizere vakazvipira kuva noukama.
Regai kutaura murume upi chikonzero
Kamwe mukadzi achaputsa ane murume akaroora, zvino zvinokosha kugumisa marudzi ose kuonana nomunhu. Mukadzi anofanira kunyange kushandura kuonana nhamba kuti parakashandiswa kuwana nekuonana nomunhu. Izvi zvichava kutanga mukupora.
Hapana munhu anogona kudzora ani kana iye kuwira murudo pamwe, zvisinei, zvinokosha kuyeuka kuti hazvina kururama kuwira murudo ane murume akaroora. On kuti katsamba, nokuti avo vakadzi vanotova murudo nevarume vakaroora, nguva yaro kuti aputse!